Da’ yar dhiban - Lastensuojelu.info
Asif dhibaatooyinkiisu waxay ka bilowdeen wax xadid
Shaqaalaha sooshalka ee badbaadada carruurta ayaa mar kale dib ula kulmay waalidka iyo wiilka. Wiilku wuxuu sheegat, inuu xanaaqo marka la caayo oo lagu yiraahdo neekeri. Waalidkuna waxay sheegeen, inuu guriga xitaa Asif si xad dhaaf ah u xanaaqo, marka xadadka loo sameeyo ama la yiraahdo waxaas ma samayn kartid.
Waxaa go’aan lagu gaarey in waalidka iyo Asif lala bilaabo badbaadada carruurta shaqadeeda qoyska . Todobaad walba qoyska waa lala kulmi jirey, waalidka waxaa loo sheegay in qoysku ku heshiiyo xeerar qoyska u degsan, sida Asif wakhtiyada ay tahay inuu guriga yimaado iyo wakhtiyada uu laylisyada samaynayo. Iskuulkana dhibidii Asif la dhibayey sidii hore si ka fiican baa wax looga qabtay, laakiin Asif sidii hore si ka xun buu u dhaqmayey. Xiisadda iyadoo lagu jiro ayuu qashqashaad samaynayey, kumana mashquuleyn waxbarashada iyo wax dhegeysiga. Asif inta badan macallinka waxba kama yeeli jirin, ee intuu xanaaqo ayuu xiisadda oo socota iska baxayey oo isaga oo aan ogolaansho haysan buu iskuulka ka tegeyey.
Waalidka, qolada badbaadada carruurta iyo qolada iskuulka ayaa si wadajir ah Asif ugu soo dhammeeyey boos ah waxbarashada khaaska ah , halkaas oo ay isaga u fududayd inuu waxbarashada u soo jeesto. Cilminafsiyaqaanka iskuulkuna wuxuu baaritaan ku sameeyey siduu Asif u awoodo inuu waxbarto. Marka la og yahay waxyaabaha sababta u ah ku adkaanta waxbarashada, waxaa la awoodaa in ardayga sidii hore si ka fiican loo caawiyo.